Indlela Yokuxoxisana Ngempumelelo Nabathonya | Martech Zone
Ukumaketha kwe-Influencer sekuphenduke ingxenye ehamba phambili yanoma yimuphi umkhankaso womkhiqizo oyimpumelelo, ofinyelela inani lemakethe le $ 13.8 billion ku-2021, futhi lelo nani kulindeleke ukuthi likhule kuphela. Unyaka wesibili wobhubhane lwe-COVID-19 uqhubeke nokusheshisa ukuthandwa kokumaketha kwabanamandla njengoba abathengi behlala bethembele ekuthengeni okuku-inthanethi futhi bekhulisa ukusebenzisa kwabo izinkundla zokuxhumana njengenkundla ye-e-commerce.
Ngezinkundla ezifana ne-Instagram, futhi kamuva nje TikTok, besebenzisa izici zabo zezentengiselwano zomphakathi, kunethuba elisha elivelayo lemikhiqizo yokusebenzisa abagqugquzeli ukukhulisa amasu abo okuhwebelana kwezenhlalo.
U-70% wabasebenzisi be-inthanethi base-US kungenzeka bathenge imikhiqizo kubagqugquzeli ababalandelayo, kanye nokukhuphuka okulindelekile kokuthengiswa kwezentengiselwano zomphakathi wase-US ngesamba esingu-35.8% ngaphezulu kwama- $ 36 billion e 2021.
I-Statistica futhi Ubuhlakani bangaphakathi
Kepha ngamathuba oxhaso akhulayo kubagqugquzeli, akunakugwemeka ukuthi ukuthutheleka kuzongena endaweni esivele igcwele, okwenza kube nzima kakhulu ngemikhiqizo ukuthola umgqugquzeli ofanele ukusebenza naye. Futhi ukuze ubambiswano lwe-influencer-brand lusebenze kakhulu izethameli eziqondiwe, kubalulekile ukuthi ubambiswano lube ngolweqiniso, olusekelwe ezintweni ezithakaselwayo, imigomo, nezitayela. Abalandeli bangabona kalula ngokuthunyelwe okungagunyaziwe okuxhaswe ngabagqugquzeli futhi ngesikhathi esifanayo, abagqugquzeli manje banokunethezeka kokwenqaba amadili oxhaso angahambisani nomkhiqizo wabo.
Ukuze umkhiqizo wakhe ubudlelwano besikhathi eside nabagqugquzeli abangcono kakhulu bomkhankaso wabo, ngokuya ngesithunzi ne-ROI, kufanele bakhumbule amathiphu alandelayo lapho bexhumana nabagqugquzeli babo abafiseleka kakhulu:
Cwaninga umgqugquzeli ngaphambi kokuthi ufinyelele
Sebenzisa amathuluzi ocwaningo nawokuqonda ukuze uhlonze abagqugquzeli abahambisana nezethameli ozihlosile futhi bahlobane nomkhiqizo wakho. I-51% yabagqugquzeli bathi isizathu sabo esikhulu sokungabambisani nomkhiqizo osondela kubo yileso abaluthandi noma bayalwazisa uphawu. Ukuhlunga uhlu lwabagqugquzeli abahlobana ngempela namagugu omkhiqizo kuzoba nomthelela omuhle kakhulu emkhankasweni, njengoba okuthunyelwe kwabo kuzoba okuyiqiniso kakhulu kuzithameli zabo, futhi kungenzeka ukuthi basebenze nawe kwasekuqaleni.
Amabhrendi kufanele futhi akhuthale ekuhloleni ikhwalithi yezithameli zomgqugquzeli njengoba kunama-akhawunti amaningi okungenzeka anabalandeli bangempela. Ama-45% ama-akhawunti e-Instagram omhlaba kulindeleke ukuthi abe ama-bots noma ama-akhawunti angasebenzi, ngakho-ke ukuhlaziya isisekelo sabalandeli babalandeli bangempela kungaqinisekisa ukuthi noma yisiphi isabelomali esichithiwe sifinyelela amakhasimende angempela, angaba khona.
Yenza umlayezo wakho ube ngowakho
Abagqugquzeli abanakubekezelelana, futhi akufanele, uma kuziwa ekuthinteni imikhiqizo enemiyalezo ejwayelekile, yokusika futhi unamathisele, ngaphandle kwanoma yikuphi ukwenza kube ngokwakho kubo noma inkundla yabo. U-43% uthe ungalokothi noma awuvamile ukuthola imilayezo yomuntu siqu kusuka kumabhrendi, futhi ngobuningi babagqugquzeli bolwazi bavame ukwabelana ku-inthanethi, imikhiqizo ingasebenzisa lokhu kalula ukuze kuzuze yona ukwenza ngokwezifiso iphimbo layo.
Amabhrendi kufanele achithe isikhathi namandla efunda ngokuqukethwe kwabagqugquzeli babo abafanelekile ukuze bakhe umlayezo ofanelana nomgqugquzeli ngamunye, uqondanise iphimbo nesitayela sabo. Lokhu kuzokhulisa amathuba okuthi umgqugquzeli okukhulunywa ngaye avume ubambiswano, futhi agqugquzeleke kakhulu ekuthumeleni okuqukethwe okuhehayo.
Yiba obala ekufinyeleleni kwakho kokuqala
Unganqikazi - ukucaca, nokubeka izinto obala kubalulekile uma uhlongoza imigomo yokusebenzisana kwakho nomuntu onethonya. Lapho wenza ukuxhumana kwakho kokuqala, qiniseka ukuthi ubhekana nohlaka kusenesikhathi kufaka phakathi imininingwane ebalulekile njengokuthi umkhiqizo uyini, izikhathi zokuthunyelwa, amabhajethi, kanye nezinto okulindeleke ukuba zilethwe. Lokhu kuvumela umgqugquzeli ukuthi enze isinqumo esinolwazi, ngokushesha okukhulu futhi kuvumela izinhlangothi zombili ukuthi zigweme ukungqubuzana phakathi nomgwaqo.
Kubalulekile ukuthi amabhrendi ashaye ithoni elungile ekuxhumaneni kwawo nabagqugquzeli abathandwayo ukuze kuvikelwe ubambiswano oluphusile, oluyiqiniso kanye nokwenza ngcono imikhankaso yabo yokumaketha. Njengoba imboni yokumaketha enethonya iqhubeka nokuchuma, imikhiqizo izodinga ukuzivumelanisa nayo.
Tags: indlelaindlela yokuxhumana nabathonyaungafaka kanjani i-influencerhypeuditorumthelelaukumaketha kwamathonya